Suzi Shapiro's Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Suzi Shapiro
Suzi Shapiro akapedza hupenyu hupenyu achidzidza nezve mashandiro anoita vanhu uye mashandisiro eruzivo urwu kuita kuti hupenyu hwavo huve nani. Suzi ane makore mazhinji echiitiko seyunivhesiti Psychology uye Informatics purofesa uye seMushandisi Chiitiko Mutsvagiri uye akashanda nevanhu vanobva kumabhizimusi akasiyana siyana, kubva kuTechnical kusvika kuFedhiyo kuenda kuUrapi kusvika Kudzidzo. Suzi parizvino ari Principal User Experience Consultant na GravityDrive. Ivo Vashandisi Zviitiko Dhizaini maitiro anogona kuvandudza maitiro, masevhisi uye zvigadzirwa. Iye zvakare ane basa rekuvandudza kudzidziswa kwevanhu vanoda kuvandudza mushandisi Chiitiko Dhizaini maitiro mumakambani avo.
Muvhuro, March 7, 2016 Muvhuro, Ndira 23, 2017 Suzi Shapiro
CX / UX - Chete tsamba imwe chete yakasiyana? Zvakanaka, inopfuura tsamba imwe chete, asi pane zvakawanda zvakafanana pakati peVatengi Zvakaitika uye neRuzivo Rwevashandi basa. Nyanzvi dzine chero tarisiro dzinoshanda kuti dzidze nezve vanhu nekuita tsvagiridzo! Kufanana kweVatengi Chiitiko uye YeMushandisi Chiitiko Mutengi uye Mushandisi Chiitiko zvinangwa uye maitiro zvinowanzo fanika. Vaviri vane: Pfungwa yekuti bhizinesi harisi rekutengesa nekutenga chete, asi nezve kugutsa zvido nekupa kukosha